I-Ultimate Guide kwiComomid yokunyanga ukungabikho komntwana kwintombi
Julayi 2, 2019
Yonke into ngeComomid
1. Yintoni iComomid? Ingaba isebenza kanjani? 2. Usetyenziso lweCommid
3. I-Clomid dosage 4. Iziphumo zeComomid
5.Clomid Ubomi bemizuzu 6. Imiphumo yeComidid Effects
7. Izibonelelo zeCommid 8. Uhlolo lweComomid
9. Clomid ukuthengiswa 10. I-Clomid yokunyanga ukungabikho kwintsholongwane yabesifazane- (Isishwankathelo)
Yintoni iComomid? Ingaba isebenza kanjani?
I-Clomiphene citrate nayo ibiza Clomid (50-41-9), imyeza yomlomo esetyenziselwa ukunyanga iintlobo ezithile zeentlobo zentombi. Ehlabathini lonke idayiswa phantsi kwamagama ahlukeneyo efana ne-Clomidac, clomene, iBemot, Clomi, clomifen, Beclom, Blesifen, Biogen, Blesifen, Chloramiphene, ClomHEXAL, et al. Ukusetyenziswa kwayo kwavunywa kwaye kunconywa ukuba kusetyenziswe unyango kwi-1967 e-USA. Yonke impawu zezempilo zifuna le ngonyango ekhuselekileyo neyona ndlela isebenzayo ngokubhekiselele kuluhlu lweeMfuno zeMida kwi-World Health Organization. Kufunyanwa njengamachiza aqhelekileyo. I-Clomid iphakathi kwezinye iindlela zokufakelwa kweendlela zokungeniswa kwamabhinqa angenayo intsholongwane ngenxa ye-oligo-ovulation ne-anovulation.
Iyeza lisebenza ngendlela enomzimba wokucinga ukuba amanqanaba e-estrogen aphantsi kwaye ngenxa yoko kubangela i-pituitary gland ukuba ikhulise i-hormone LH okanye i-follicle evuselela i-hormone enye enye eyaziwa ngokuba yi-FSH secretion. Amanqanaba aphakamileyo e-FSH akhuthaza ama-ovari ukuba abe neyodwa okanye ngaphezulu kwee-follicle zamaqanda eziveliswe eziza kuphuhliswa okanye ziveliswe kwi-ovulation. Ngakolunye uhlangothi, amazinga aphezulu e-LH avuselela i-ovulation.
Clomid (50-41-9) ibe yindlela ekhethiweyo kakhulu phakathi kwama-oldsters afanelekileyo kwiminyaka engaphezu kwamashumi amahlanu oogqirha ngoncedo lwezokwelapha okanye i-OB-GYN ngokuqhelekileyo imisela i-clomiphene citrate ngaphambi kokuba ibhekisele enye okanye ezimbini ukuba zikhangele ingcali yonyango yokunyamekela okongeziweyo. Ezinye iingcali ezivelisayo zenza i-clomiphene citrate nayo. Eli cebisi alinakucetyiswa kubafazi abanama-ovari awakhiqiza amaqanda ngokufanelekileyo (uphulo oluphambili okanye ukuhluleka kwe-sex gland).
Isimo somzimba sangasese, isifo esingafanelekiyo, i-amenorrhea, i-amenorrhea yesibini, i-post-contraceptive amenorrheas, i-galactorrhoea, i-syndrome ye-polycystic ovaries, i-Chiari-Inmelm, i-steroid i-hormone insufficiency, i-oligospermatism, ukufumanisa ukuphazamiseka kwe-gonadotrophic function ye-endocrine gland. I-Clomiphene citrate ihlala isiluncedo kulabo bazama ukukhuthaza isikhungo seZizwe eziManyeneyo sinezi ngxaki zilandelayo:
I-Ovulation engavumelekanga: kuyinkathazo yokukhulelwa emva kokuba i-unit unit cycle circle isingenangqiqo ukuba ayikwazi ukuqiniseka emva kokuba i-ovulating. Xa kusebenza ngokufanelekileyo, ukusetyenziswa kwe-clomiphene citrate kufanele kuvelise impendulo eqinisekileyo ye-ovulatory kwiimvume zokulala ngokwesondo okanye ukusabalaliswa kwe-intrauterine.
I-"Fact Factor" iingxaki zokuzala: emva kokuba kukho i-tangle enobuhle bomzimba, ngokugqithiseleyo ugqirha wakho ungabonisa ukuba insemination ye-intrauterine iphakamisa imeko yokuphila. I-Clomiphene citrate ijwayele ukuququzelela ilungiselelo lexesha lexesha lokusasazwa nomjikelezo wesifazane.
Ukungenzi lutho olungenanto: i-citomiphene citrate iye yaboniswa ngokusebenzayo ekunyuseni amazinga omzimba kwimibhangqwana encinci enempilo eye yafumana uhlalutyo lwezityalo ngokuqhelekileyo, nangona kunjalo inyunithi yendawo inendawo yokufumana ukukhulelwa.
Akwacebisi ukuba enze uvavanyo lwe-ultrasound ukuba lukhuphe ngaphandle kwanoma yiyiphi indlela ebalulekileyo yokusabalalisa igxeni yesondo ngaphambi kokuba yonke imjikelezo yonyango olutsha.
I-Clomifene isetyenziswe ngokusebenzisana kunye neeteknoloji zokuvelisa ezithintekayo ngemoto ukunyusa amazinga okuphumelela kwezo zindlela ezahlukeneyo
I-Clomifene isetyenziselwa ukonyango lwe-eunuchoidism njengenye kwenye i-androgenic ye-hormone ukunakekelwa kwonyango.
Ifom yexabiso: ipilisi ye-NDC 0068-0226-30: iipilisi ze-50 mg kwiikhetshi ezingamashumi amathathu
Amacwecwe ayingxenye yecandelo elimhlophe, elimhlophe, elixhaswe, kunye ne-clomiphene citrate engamashumi amahlanu.
Gcina iipilisi kwiqondo lokushisa elilawulayo 59-86 ° F (15-30 ° C). Isihlangu esivela ekushiseni, ekukhanyeni, nokumanzi okugqithiseleyo, kunye nokugcina kwisitya esivaliweyo.
Ukukhutshwa kunye nokunyangwa kwabaviwa kwi-clomiphene unyango lwezonyango kufuneka lilawulwe ngamagqirha endala ekulawuleni okhethekileyo kwizonyango okanye kwiingxaki ze-endocrine. Izigulane kufuneka zikhethwe unyango lwe-clomiphene citrate kuphela xa uhlalutyo oluchanekileyo. Ulungelelwaniso lwonyango kufuneka luprintwe ngaphambili. Impembelelo yokufezekisa injongo yokunyamekela unyango kufuneka ikhutshwe okanye ifakwe ngokwaneleyo ngaphambi kokuqala i-clomiphene citrate. Injongo yokwelapha imele ilandelelaniswe nemingcipheko enobungozi kwaye ichazwe ngesigulane kunye no-al. ezichaphazelekayo ngaphakathi kwimeko yesimo somzimba.
Ukunyangwa kwesigulane esikhethiweyo kufuneka, ngokuqala, i-dose, i-50 mg yemini nganye (i-tablet ye-1) iintsuku ezintlanu. Imilinganiselo kufuneka ixoxiswe kuphela kwezo zigulane I-agency yeZizwe eziManyeneyo ayinayo i-response ye-cyclic fifty-cl clipiphene citrate. Ubuninzi bekhofi okanye ubude becandelo lonyango lucebisa ngokukhethekileyo ukuba ulwaphulo oludlulileyo kwi-hormone ye-pituitary lucatshulwa, njengalezi zigulane ezine-polycystic ovary syndrome.
Isigulane sifanele sihlolisiswe ngokukhawuleza ukuba singabandakanyi imeko yomzimba, ukukhulisa ngesondo, okanye utywala phakathi kwimijikelezo yonyango.
Ukuba ukucuthwa kwe-progestin kucetywayo, okanye ukuba i-body organism inzala yokuzala isangqa kwenzeka ngaphambi kokunyanga, unyango lwemihla ngemihla engamahlanu eentsuku iintsuku ezintlanu kufuneka uqaliswe okanye malunga nomhla wesihlanu womjikelezo. Unonophelo lwonyango lunokuqaliswa nanini na ixesha kwisigulane seZizwe eziManyeneyo. Emva kokuba inkqubo ye-organic iyenzeka kule dosi, akukho nzuzo ekunyuseni umthamo kwimigudu yokuphucula.
Ukuba inkqubo ye-organic ayibonakali ukuba yenzeke ngexesha leprayimari yokunyamekelwa kwezonyango, ikhosi yesibili yemihla ngemihla (amacwecwe amabini anamashumi amahlanu amagqithwa anikezelwa njengomtya omnye wemihla ngemihla) kufuneka ihambe. Le khosi inokuqaliswa kwakhona emva kweentsuku ezingamashumi amathathu kanye elinye elidlulileyo linye inqununu yendawo yokukhusela ithathwa ukuba ingabandakanyi ubukho bomama. Ukwandisa umthamo okanye ixesha lokunakekelwa kwezonyango kwicala elide kwiig mg / ngosuku iintsuku ezintlanu akucebisi.
Ininzi yezigulane zeZizwe zeZizwe eziManyeneyo zicwangcise ukukhutshwa ziyakwenza njalo emva kwexesha eliphambili lonyango. Ukuba inkqubo ye-organic ayikho kanye neeklasi ezintathu zonyango lwempilo, unyango olongezelelweyo kunye ne-clomiphene citrate alucebisi kwaye kwaye isiguli kufuneka sihlaziywe kwakhona. Ukuba kukho izimpendulo ezintathu zeempatho, nangona kunjalo ukubeleka akuzange kufumaneke, unyango olongezelelweyo alucebisi.
Ekubeni i-clomiphene citrate ikhokelela ekukhutsheni kwamaqanda amaninzi, amathuba akho okufumana ukuphindaphinda (amawele okanye amathandathu ... ngamanye amaxesha ngaphezulu) akhuphuka. Ukusebenza kunye nenxulumano yolwazi lokuzala inzululwazi yeZizwe eziManyeneyo iyalela ukuba umthamo ochanekileyo unciphisa ithuba lokuphindaphinda i-multiples order.
I-IVF yinye inqubo yokunciphisa inani leintsana ngokubeleka kwezilwanyana eziphezulu / iziphumo zentsana.
Xa kubandakanyeka ukuvuselela inkqubo ye-organic, i-clomiphene citrate iyinqoqo ngokukhawuleza, ekhokelela ekukhutsheni amaqanda aqolileyo malunga ne-80 yeentombi zamanyeneyo.
I-Boldenone Undecylenate (i-Equipoise) Ukusetyenziswa, i-Cycle, Isisombululo, Ukusika, Ukukhupha(Ivula ithebhu entsha)
Ukuba usanda kumisa i-clomiphene citrate, kunethuba onokuthi usebenzise ubuchule obunomdla wentsuku (okanye iiveki ezingenakuqikelela) xa unomsi wokugqibela. Ezi ziphumo ezinokuthi zikhokelela zikhokelela ekubeni uzikrokre ukuba i-clomiphene citrate kunye ne-metabolites yayo kufuneka ihlale yinkqubo yakho kwaye imangaliswe nantoni na phambi kwexesha. Ukubona nokuba kunjalo i-clomiphene citrate ingakanani ihlala ihlala yakho, kufuneka ukuba ucinge malunga nesigamu-sokupheliswa kweentsuku ezintlanu ukuya kwiintsuku ezisixhenxe.
Ukuqedwa kweentsuku ezihlanu ukuya kwezixhenxe Ubomi besiqingatha seComidid lithetha ukuba kuya kuthatha iiveki epheleleyo emva kokuba umthamo wakho wokugqibela uphelise i-dose ye-clomiphene ye-citrate dose ukusuka kumatshini. Ukwazi ukuba i-clomiphene igxobhoza ixesha elide lokuphelisa ubomi, uza kuchaneka ekucingeni kwakho ukuba kusekho kwinkqubo yakho - nokuba sele iiveki ukusuka kwidayi yakho yokugqibela. Ngokomyinge, kuya kuthatha phakathi kwemashumi mabini anesixhenxe.5 kunye ne-38.5 iintsuku zokuphelisa i-clomiphene citrate kwi-system yakho ngokupheleleyo; malunga neeveki ezine ukuya ezintandathu
Ezinye iingxelo zengxelo yokuba ubuncinane beComomid malunga neeveki ezimbini (iintsuku ze-14), oko kuthetha ukuba i-clomiphene citrate ingagcina kwisistimu yakho ukuya kwiiveki ezilishumi elinanye emva kokuba umthamo wakho wokugqibela. Uninzi lwabasebenzisi kufuneka balindele ukuba i-clomiphene citrate ihlale ijikeleza phakathi kweenyanga ezintathu ukuya kweyodwa emva kokuba unyango lwabo lokugqibela. Kufuneka kuqatshelwe ukuba i-clomiphene citrate iqukethe ama-isomers amaninzi: i-clomiphene (~ 62%) kunye ne-zuclomiphene (~ 38%).
Isiqingatha-sokupheliswa kwempilo ye-clomiphene yekhemikhali yekhemikhali iyaxhamla kwiiyure ezingama-24, ngelixa i-zuclomiphene i-chemical compound ide kakhulu. I-clomiphene isakhiwo sichithwa kodwa ngeveki enye, kanti inxalenye ye-zuclomiphene ityala ixesha elide lokuqedwa kuka-Clomid. I-Zuclomiphene ibonakala ngaphakathi kwiplasma kakuhle kanye nenyanga enye ye-clomiphene i-citrate isiphetho kwaye ilandelelanisa imali echazwe kwintsimbi engcolileyo kanye emva kweeveki ezili-12
Nangona i-clomiphene ihlala isasazwa ngeentsuku ezilishumi elinanye ukuya kweyeshumi elinanye emva kokuba umthamo wokugqibela womsebenzisi, akubona bonke abasebenzisi abanokuphelisa iilisi ngendlela efanayo. Abanye abasebenzisi banokuphelisa i-enclomiphene kunye ne-zuclomiphene isomers esheshayo kunomlinganiselo (kwiiveki ezintandathu), kanti abanye bafanele babe ne-zuclomiphene kwi-plasma circulation once weeks. Ukuhluka kweentlobo phakathi komntu ekuqhelweni kweqhosha le-clomiphene kunokuchazwa ngamashishini afana neendawo, umyinge kunye nexesha lokulawula.
Amabhinqa amabini anokuthi, ngexesha elifanayo, angadla i-50 mg clomiphene kwiintsuku ezintlanu ezilandelelanisayo ekuqaleni kwenguqu yabo yokunciphisa ikati. Nangona kunjalo, omnye umsebenzisi unokususa isigxina ngokukhawuleza kunomnye. Konke kuxhomekeke kumandla omzimba wabantu. Abanye abasebenzisi, iziyobisi zihlala zisebenza ixesha elide ngelixa ezinye, iziza ziza kulala ngexesha elifutshane.
I-Genetics: Uncwadi lwezonyango lubonisa ukuba i-clomiphene ilawulwa yi-organ engaphakathi ye-metabolism. Nangona iqela elingaphambili lendlela elingaphakathi eliphendulwayo le-metabolism ayilucacisiwe, enye iteksi ekholelwa ukuba idlala indima enkulu yiYP2D6 (cytochrome P450 2D6).
Imiphumo yeComidid Effects
Ubuninzi beziyobisi ukuba awunabo bonke abaneempembelelo zabo kunye neentsidi zabo ngokuxhomekeke kwindlela oyisebenzisa ngayo. Ngokomzekelo, ukuba ingasetyenziswa kakubi, okanye xa ingekho ngaphezulu, iComomid inokubeka abasebenzisi engozini yokuphuhlisa uluhlu lweempembelelo. Nangona kunjalo, kukho ezinye Imiphumo emibi yeComidid eziqhelekileyo kwaye zinokuphela kwithuba elifutshane. Ngakolunye uhlangothi, unako ukufumana iziphumo eziphambili kakhulu ukwenjenjalo xa uthatha i-dosage ephezulu kunqunywe ngugqirha wakho. Iziphumo eziqhelekileyo eziqhelekileyo phakathi kwabasebenzisi beComomid ziquka;
Ubumnene besisu, intlungu, kunye nokuphazamiseka
Ukugaya igazi kunye negazi
I-Ovarian Hyperstimulation Syndrome
Nangona kunjalo, kukho imiphumo emibi kakhulu, kodwa iyenzeka kuphela kuxhomekeke kwindlela othabatha ngayo iziyobisi. Ngakolunye uhlangothi, inkqubo yomzimba womntu nayo iyimfuneko ebalulekileyo yezinto ozifumana emva kokuthatha iComomid. Abanye abantu baya kuba nemiphumo emibi nangona ukuba bathatha amanani athile okanye aphantsi. Yingakho sisoloko sicetyisa abathengi bethu ukuba bafumane uviwo lwezokwelapha ngaphambi kokuba baqale ukuthatha le nkunkuma. Xa uthe wafumana nayiphi na le miphumo, kufuneka ufune unyango lwangonyango.
Kufuneka uqaphele ukuba ukuba izinto zihamba kakuhle, iComomid inokukhokelela ekukhulelweni ezininzi. Kukho ithuba eliphezulu lokuba ukhulelwe xa usebenzisa le mveliso, malunga ne-7% ukuba uza kufumana amawele kunye ne-0.5% ithuba lokuba ufumane ama-triplets okanye i-oda eziphezulu. Kuqiqile ukuba uthethe ugqirha wakho kuqala, uxoxe ngengozi, kwaye ujonge ukuba ufanelekile ukuthwala amawele okanye ukuphindaphinda. Ukuba awukulungele ukukhulelwa, kuqikelele ukuba uqaphelisise.
Ngaphambi kokuba usebenzise iCommid, qiniseka ukuba awuyonto okanye i-hypersensitive kwiyiphi na izithako zayo. Unokuthetha ngogqirha wakho kuqala uze uvumele ingcebiso yengcali malunga nokuba ufanelekile ukuyisebenzisa. Ngale ndlela, unokuphepha ukuzibeka engozini yokufumana nayiphi na le miphumo. Kwakhona, qiniseka ukuba ulandela isilinganisi esinconywayo.
Kubasetyhini abasebenzisa le mveliso ngokuchanekileyo kwaye abaxhomekekanga kuyo, zininzi izibonelelo ezinokulindela. Qinisekisa ukuba uquka ugqirha wakho ngaphambi, ngexesha, nangemva kokugqiba umlinganiselo wakho we-Clomid ukuze ujonge kakhulu Izibonelelo zeCommid. I-Clomid inikeza iintlobo ezahlukeneyo zabasebenzisi abanjengalandelayo;
Iindleko eziphumelelayo-ezi ziphakathi kwezona ndlela zifikeleleke kakhulu zokuphatha ukungabikho komntwana. Iindleko zeCommid xa kuthelekiswa namanye amanyathelo afana ne-IVF ayinakulinganiswa. Kufikile njengomgcini-ubomi wabantu abaye bajongana nemiba yokungabikho komntwana kodwa bengenakho unyango ngenxa yokunqongophala kwemali. Iziphumo abasebenzisi abazithola kuyo zigqithise ixabiso lemali esetshenzisiweyo.
Yimithi yomlomo - unyango lomlomo lulula kakhulu kwaye lufika ubuncinane ubunzima. Oku akufani neenjoyi apho abasebenzisi kufuneka babeke khona inaliti kuwo wonke umzimba wabo, onokuba yinto enamandla. I-Clomid enye yezinto ezimbalwa zokunyanga ezingenasifo esindisa abantu besifazane kwiingxaki ezinjalo.
Umncedisi oyintloko uyakwazi ukuyibeka - iindaba ezilungileyo kukuba akufanele uvakashele ingcali yokuzala ukuze uthole umyalelo weCommid. Oku kukuphucula ukulungeleka, ingakumbi ukuba awukwazi nayiphi na ingcali yokuzala okukufutshane nawe. Ingumncedi wexesha, kwaye inxalenye engcono kukuba kukukhuselekile ukusebenzisa xa ulandela isilathiso esiluncedo sokusetyenziswa.
Iza neempembelelo ezimbalwa - ukuba zisetyenziswe ngokufanelekileyo, iClomid ineziphumo ezingaphantsi kweziphumo. Ukuba ufumana nayiphi na, banobubele kuphela obuya kuhamba ixesha elifutshane emva kokuyeka ukusebenzisa okanye emva kokuba umzimba wakho usetyenziswe kwimiphumo. Kwakhona, khumbula ukuthenga isicatshulwa kumvelisi ohloniphekileyo okanye umthengisi ukuqinisekisa ukuba ufumana umgangatho ophezulu kwimiphumo engcono yeComidid.
Le mveliso ifumene ezininzi iimpendulo ezilungileyo kunye nokulinganisa kwabo bazisebenzise ngaphambili. Uninzi lwabantu abasetyenzisiweyo bathi baziva ngokukhawuleza Iziphumo zeComomid, kwaye bamangaliswa yindlela umkhiqizo owenziwe ngayo emzimbeni. Ininzi yabasetyhini bathi balahlekelwe ngamaxesha abo xa abanye befumana ingqungquthela kwaye bangakwazi ukukhulelwa, kodwa oko bekude bafunde malunga nale mveliso emnandi. Kwakhona, uninzi lwazo lwafumana iziphumo zingangeenyanga ezintathu emva kokusetyenziswa.
Abambalwa babo bakhononda ngeentloko, isisongululo, isifo sohudo kunye nokuhlanza kodwa ininzi yalabo abaye bavuma ukuba baye baphila ngokugqithiseleyo kwiziyobisi kunye nemiphumo emibi yema emva kokulungisa ukusetyenziswa. Ngakolunye uhlangothi, uninzi lwabasebenzisi abakhalazo lokuba namava ambi kunye noClomid baye bavuma ukuba basebenzise le nkunkuma ngaphandle kokuhlolwa kwezokwelapha. Kuqhelekileyo ukuba umkhiqizo wezobisi ufumane impendulo edibeneyo kunye nezibuyekezo ezivela kubasebenzisi abahlukeneyo. Ngokuqhelekileyo, iClomid yipilisi efanelekileyo kakhulu yokunyanga amaxesha angabikho kwabantwana abasetyhini. Inxalenye entle kukuba awuyi ku funeka ufumane ii-injections eziqhelekileyo kuba isilwanyana somlomo. Uqala ukufumana iziphumo ngaphakathi kwithuba elifutshane, nokuba abanye abasebenzisi babika ukukhulelwa emva kweenyanga ezintathu zokulinganisa.
Isikhokelo esiphezulu seTesttosterone sokuqhaqha isakhiwo sokwakha umzimba(Ivula ithebhu entsha)
Kalokunje ukuba ugqirha wakho ukunike umrhumo, kuyaqhelekile ukuba uzive ukhululekile kwaye uphazamiseke ukuzama. Oku kunokukhokelela ukuba uthenge kuyo kumthengisi wokuqala oza ngendlela yakho, kwaye loo mpazamo enkulu. Ukuba ukhangele ukuthenga i-Clomid, kufuneka uqaphele ukuqinisekisa ukuba uyifumana kwi-trustworthy Umthengisi weCommid kwaye ukuba ungayi kuba ngumgibe wobugxeki. Kuye kwandiswa imfuno yale mveliso, eyakhokelela ekunyuseni kwinani labathengisi abakhulayo kwaye bathi bayayithengisa. Ukuba awuqapheli ngokwaneleyo, uya kugqiba ukuchitha imali eninzi kwizinto ezingenakukunika iziphumo ozifunayo. Kwakhona, unako Thenga i-Clomid powder ezingakhuselekanga ukusetyenziswa, eziza kukubangela imiphumo emibi kakhulu kunye nentlungu kunokuba sele ujongene nayo.
Thatha ixesha lakho kwaye ujonge umthengisi we-Clomid ongayithemba. Ukuthenga i-Clomid kwi-intanethi kukunika ukuvezwa okufunekayo ukuba ufumane okulungileyo. Hlola ukuhlaziywa kwe-intanethi uze ubone ukuba yintoni abanye abantu abathengile iimveliso ezivela kumthengisi othile bethetha ngemveliso. Unakho kwakhona kwiingcebiso ezivela kumhlobo okanye isihlobo owaziyo ukuba usetyenzisile le mveliso ngaphambili kwaye ubavumele ukuba bakuthethelele kumthengi wabo ozithandayo. Iindleko nazo zibalulekileyo xa zikhangela Clomid ukuthengiswa ngaphandle kokuba isicwangciso sakho senqwelo-mali sibandakanya iindleko. Akufanele uvumele ukuba ufumane i-overcharged kodwa endaweni yoko, yenza uphando, uqonde intengo yexabiso lentengiso kwaye uye kumthengisi ngexabiso elifanelekileyo.
Imithi yinto enomdla, kwaye kufuneka uyiphathe ngokubaluleka okukhulu. Musa ukukhawuleza ekuphakanyisweni kokuqala okuza kwindlela yakho kodwa kunoko, khangela umgangatho. Iindaba ezilungileyo kukuba njengamanje singumniki-mthengi ongcono kwi-Clomid kummandla. Unokwenza i-oda yakho ibe lula nge-smartphone yakho, kwaye siya kusikhulula emnyango wakho. Amanani ethu ayenengqiqo, kwaye unako ukuthenga iComidid ngobuninzi kwiwebhusayithi yethu yomsebenzisi. Sinike ifowuni nanini na unemibuzo okanye ufuna uncedo ekwenzeni umyalelo wakho. Imizila yethu yocingo ivuliwe 24 / 7.
I-Clomid yokunyanga ukungabikho kwintsholongwane yabesifazane- (Isishwankathelo)
I-Clomid iboniswe ukuba iphumelele xa ifika kwonyango lweengxaki zenzalo kubasetyhini. Isebenza ngokwenza umzimba ucinge ukuba amanqanaba e-estrogen yomsebenzisi aphantsi kunokuba ayenjalo, okwenza ukuba i-pituitary gland yenze i-hormone evuselela i-folmone. Oku kukhuthaza i-ovary ukuvelisa i-ovum okanye i-ova, kwaye umsebenzisi unako ukukhulelwa ngexesha lokuvuthwa. Umgaqo ochanekileyo, kwaye isilwanyana sele sisebenzele abantu abaninzi abasebenzisa ixesha labo ukukhangela iGolomid eyiyo (50-41-9) kwaye uyisebenzise ngendlela efanele. Ukuba unayo nayiphi na ingxaki ezinxulumene nokuzala, zama ukutyalo kule mveliso kwaye ujonge iziphumo.
Nangona kunjalo, qiniseka ukuba uququzelele ugqirha wakho kwinkqubo yonke yokulinganisa iziphumo eziphezulu. Unganqikazi ukuxelela amayeza akho ukuba unayo nayiphi na imiphumo echaphazelekayo okanye xa uhlaselwa kwisilwanyana. Ngokufanayo, biza i-physic yakho xa unemiphumo emibi ngaphambi kokuba imeko ibuhlungu.
Joham, AE, Teede, HJ, Ranasinha, S., Zoungas, S., & Boyle, J. (2015). Ubuninzi bokungabikho komntwana kunye nokusetyenziswa kokonyango kwenzalo kubasetyhini abane-polycystic ovary syndrome: idatha evela kwisifundo esikhulu esisekelwe kuluntu. Umbhalo wezempilo yabasetyhini, 24(4), 299-307.
Berger, MH, Messore, M., Pastuszak, AW, & Ramasamy, R. (2016). Umbutho phakathi kokungabikho komzimba kunye nokungaxhatshali ngokwesini kwindoda nabasetyhini. Ukuphononongwa ngonyango, 4(4), 353-365.
The Ultimate Guide to Liothyronine sodium/T3 for Bodybuilding